Khilaaf xoogan oo soo kala dhax galay hanti dhowraha qaranka iyo ku xigeenkiisa – Puntlandtimes
Khilaaf xoogan oo soo kala dhax galay hanti dhowraha qaranka iyo ku xigeenkiisa
January 14, 2019 Puntland PL
MUQDISHO(P-TIMES)- Waxaa banaanka usoo baxay khilaaf mudooyinkan u dhaxeeyay Hanti Dowraha Qaranka Maxamed Maxamuud Afgooye iyo kuxigeenkiisa Cali Abuukar , khilaafkan ayaana ahaa mid mudooyinkii lasoo dhaafay sii xoogeesanayay.
Sida aan Wararka ku heleyno khilaafka Hanti Dhowraha Qaranka iyo kuxigeenkiisa ayaa salka ku haya arimo dhowr ah ay kamid yihiin dad ku heyb ah Hanti Djowraha Qaranka oo dhawaan laga shaqeeliisiiyay Xafiiska Hanti Dhowrka.
Cali Abuukar kuxigeenka Hanti Dhowraha Qaranka ayaa sheegay in Mr Afgooye uu awooda xafiiska wada maroogsada dhawaanahan uu shaqaaleesiinayay dad aan qibrad laheyn balse ku heyb ah.
Waxa uu sheegay Cali Abuukar in shaqaalihii hore ee Xafiiska Hanti dhowrka Qaranka in ay cabasho ka keeneen shaqaalaha cusub ee lagu wareejiyay shaqadooda, waxa uuna xusay dacwad arintaasi ka dhan ah in ay gudbiyeen Madaxda sare ee dalka.
“Runtii Shaqaalo fara badan oo ehelkiisa ah ayuu keenay, baaris ayay sameeyaan, Shaqaalihii kale waa ay xanaaqeen, hanta dhowraha ayaa Xarunta dambi baarista ee CID-da uga yeeray ,arrintaasina waan ku kala qayb sanahay, waxaan warqad dacwad ah u gudbiyay Xafiisyada ,Madaxweynaha,Ra’iisul Wasaaraha iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka.”Ayuu yiri Kuxigeenka Guud 1aad ee Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka.
Khilaafkan soo banaan baxay ee u dhaxeeya Hanti dhowraha Qaranka iyo kuxigeenkiisa ayaa laga cabsi qabaa in labada masuul midkood uu ku baxo hadii aysan Madaxda sare dowlada soo faragalin khilaafkan taagan.